पशुपतिनाथ मन्दिरको बारेमा १० रोचक तथ्य जुन सुनेर छक्क परिन्छ …. - Arghakhanchi Saptahik
Home Slider समाचार पशुपतिनाथ मन्दिरको बारेमा १० रोचक तथ्य जुन सुनेर छक्क परिन्छ ….
पशुपतिनाथ मन्दिरको बारेमा १० रोचक तथ्य जुन सुनेर छक्क परिन्छ ….
पौराणिक कथाअनुसार, नेपालमा पर्ने चन्द्रावन हिमालय पर्वत को गुफामा इच्छापूर्ती गरिदिने ‘कामधेनु गाई’ आएर बसेका थिए। कामधेनुले दिनहुँ पर्वतबाट तल झरी माटोमाथि आफ्नो दूध चढाउने गर्थे। यसरी हजारौँ वर्षसम्म पनि कामधेनु गाईले सो ठाउँमा दूध चढाउन थालेपछि एकदिन त्यहाँ वरिपरिका मानिसहरूले के रहेछ भनि खन्दा एउटा सुन्दर चमकदार शिवलिङ्ग भेटेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले सो शिवलिङ्गलाई पुजा गर्दै आएका थिए। त्यसैल स्थललाई नै पछि ‘पशुपतिनाथ’ भनिएको हो भन्ने पनि विश्वास गरिन्छ।